Home PUBLICATION BROCHURE
Barruullee 07-08-2013	Monday, 15 April 2013 09:09	eskinder	Dh.D.U.O.n, akkaatuma dambii ittiin bulmaataa keessa taa’ee jiruun, waggaa lamaa hanga waggaa lamaa fi walak­kaa keessatti yaa’ii dhaabbatummaa idilee isaa gaggeessaa as gaheera. Hanga ammaattis yaa’ii dhaabbatummaa idilee al-jaha gaggeessee jira. Yaa’ii dhaabbatummaa idilee hanga yoonaatti gaggeeffa­maniinis, bu’aaleen gurguddoon galmaa’aniiru. Ciminoota hojii keessatti mul’atan caalmaatti cimsuu fi itti fufsiisuu, hanqinoota mul’atan maqsuu fi hojii waggoota itti-aananii ilaalchisee kallattiiwwanii fi murtiiwwan dhaabni keenya kaa’uufi dabarsu keessatti yaa’iiwwan dhabbatummaa idilee gahee olaanaa taphataniiru. Murtiiwwan yaa’iiwwan dhaabbatummaa idilee dhaaba keenyaan murtaa’anii fi kallattiiwwan yaa’iiwwan kunneen kaa’aniin, naannoo fi biyya keenya keessatti milkaa’inni boonsaa ta’ee fi ummata sadarkaa sadarkaan jiru fayyad­amaa taasise galmaa’aa jira. Wayita ammaa kanas, injifannoowwan boonsaa gaggees­summaa dhaaba keenyaan gama hundaan galmaa’aa jiran kana caalmaadhaan itti fufsiisuun murteessaadha. Amala Dh.D.U.O. tis. Bu’uuruma kanaan, ciminootaa fi hanqinoo­ta gaggeessummaa dhaaba keenyaa keessatti mul’atan adda baasuudhaan ciminoota caalmaatti gabbifannee, hanqinoo­ta maqsuu, akkasumas, kallattii itti-aanu kaa’uu keessatti yaa’ii dhaabbatummaa idilee 7ffaa dhaaba keenyaa murtees­saa fi bakka guddaa kan qabudha. Yaa’iin dhaabbatummaa idilee 7ffaa Bitootessa 9-11/05 gag­geeffamu kunis ta’eewwan /events/ yaa’iiwwan kanaan du­raa irraa adda isa taasisan baay’ee qaba.
Read more...	BROCHURE	Wednesday, 22 June 2011 11:22	web admininistrator	Heerri Mootummaa Federaalawaa Dimokiraataawaa Rippaabiliika Itoophiyaa Sadaasa 1987 A.L.I hirmaannaa sabaa sablammootaa uummatoota biyyattiitiin raggaa’e bu’aawwan hedduu lammiilee biyyaatii gonfachiiseera.Kana keessaa tokko uummatni biyyaatii mirgaofiin of bulchu akka argatu taasisuu dha. Mootummaan naannoo oromiyaas bu’uura heera mootummaa Itoophiyaatiin bara1984 labsii lak.7/1992 baheen hundeeffame. Mootummaan naannichaa heera kana bu’uree€ atee hunda’ee kun qaamolee mootummaa sadeen of keessatti qabata. Cafeen:_Qaama mootummaa olaanaa  kan seera tumu dha. Aangoo hojii raawwachiisuu kan qabu immoo mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaati. Manni murtii immoo qaama seera hiiku . Magaalaa guddoon mootummaa naannoo Oromiyaa Fin nnee dha Bali’inni lafa oromiyaa 363,314.9km2 ./kunis bal’ina waliigalaa biyyaatti keessaa %34.3 ta’a. Bali’inna lafaa kana keessaa harki caalaan/88% /qixxee diraa galaanaatii oliin olka’iinsa 500m-2500qaba.Naannoon oromiyaa naannolee salgan mootummaa Fedaraalaa Last Updated ( Thursday, 23 June 2011 14:35 )
No of Vistors visited the site since dec 27,2010 : 5376161